स्वास्थ्य खबर – Page7– rastriyakhabar.com
काठमाडौं । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, कोभिड–१९ को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ असोज १० गते छैटौं सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदै छ । परिवार स्वास्थ्य कल्याण महाशाखाले शुक्रबार जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक डा भीमसिंह..
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा ६ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५सय ५९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ७० हजार पुगेकाे छ । पछिल्लो २४ घन्टामा विभिन्न जिल्लामा १ हजार ३ सय १३ जनामा कोरोना..
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालका ४२ जना डाक्टरले आफ्ना समस्या समाधान नभए ‘सामूहिक’ राजीनामा दिने बताएका छन् । अध्ययनका लागि नियमावली संशोधन गरी समयमै पास नहुँदा आफूहरुलाई समस्या परेको भन्दै डाक्टरहरुले सामूहिक राजीनामासम्मको पत्र लेखेका छन् । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरलाई सम्बोधन गर्दै..
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा १७ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ सय ५३ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय देशभरको आधा भन्दा धेरै संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा उपत्यकामा..
रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट बुधबार अपराह्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रिएको छ । चीनबाट आयात भएका दुई ट्रक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रिएकाे हाे । आयात भएका ती सामग्रीको भन्सार जाँच गर्ने कार्य आजै सम्पन्न भई दुवै ट्रक गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको जानकारी रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार..
काठमाडौं । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती गृहमा जीवित जन्मेको शिशुलाई बाँच्न नसक्ने भन्दै ८ घण्टासम्म फोहोरमा फ्याँकेर उपचारमा चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ । सिन्धुली गोलन्जोर–२ का उत्तम घिमिरे र श्रीमती अन्जु थापा दम्पत्तिको शिशुको उपचारमा उक्त अस्पतालले यस्तो चरम लापरबाही गरेको हो । गर्भवती..
काठमाडौं । अनसनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले आठ सदस्यीय चिकित्सक टोली गठन गरेको छ । उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा राखेर उपचार गर्न डा रेवतीरमण मल्लको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरिएको सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।..
काठमाडौँ। पछिल्लो २४ घण्टामा थप १३५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसं‌ख्या मन्त्रालयका अनुसार ११ हजार १५४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १३५६ जनामा संक्रमण देखिएको हो । त्यसै गरि पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ६४७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । काठमाडौंमा ५११,..
२४ घन्टामा १,१५४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा १ हजार १ सय ५४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घन्टामा थपिएका १ हजार १ सय ५४ जनासहित देशभर संक्रमितको संख्या ६५ हजार..
प्रसूति गृहमा कोरोना संक्रमित १० महिलाको सफल डेलिभरी, बच्चामा छैन संक्रमण !
काठमाडौं । थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा अहिलेसम्म १० जना कोरोना संक्रमित महिलाले सफल रुपमा बच्चा जन्माएका छन् । नवजात शिशुमा कोरोना संक्रमण नरहेको अस्पतालका उप–निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले बताए । संक्रमित रहेकै अवस्थामा सुत्केरी भएकाहरुको अवस्था अहिले सामान्य..
कोरोना संक्रमितको संख्या ६२,७९७ पुग्यो : पछिल्लो २४ घन्टामा १,२०४ जनामा संक्रमण
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशका विभिन्न जिल्लामा १ हजार २ सय ४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो २४ घन्टामा थपिएका १ हजार २ सय ४..
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घन्टामा ८ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६९८ जना, भक्तपुरमा ८२ र ललितपुरमा ७९ जनासहित उपत्यकामा पछिल्लो २४ घन्टामा जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा विभिन्न..
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या थपिएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा विभिन्न जिल्लामा ४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थपिएका ४ जनासहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ सय ८३ पुगेको छ । कोरोना भाइरसको..
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढीरहेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ७ सय ३७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६ सय ५२ जना, भक्तपुरमा २५ जना र ललितपुरमा ६० जनासहित उपत्यकामा पछिल्लो २४..
उपत्यकामा पछिल्लो २४ घन्टामा ६७६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढीरहेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ६ सय ७६ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ५ सय ५५ जना, भक्तपुरमा ८६ जना र ललितपुरमा ३५ जनासहित उपत्यकामा पछिल्लो २४..